Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvodzekera Kumba neChitatu
Mumiriri weZimbawe muSouth Africa VaDavid Hamadziripi vanoti vanhu vanodarika zvuru zvishanu vari kugara muSouth Africa vanyoresa kumuzinda wavo vachiti vanoda rubatsiro.
Pavanhu ava vanodarika zvuru zviviri zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe, 2191 vati vanoda kudzokera kumusha vamwe vanodarika zvuru zvitatu vachiti vanoda rubatsiro rwzvekudya.
Chikwata chekutanga chiri kutarisirwa kudzoserwa kumusha musi weChitatu kana muzinda uyu wawirirana nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa..
VaHamadziripi vati hapana rubatsiro rwemari yekufambisa ruchapiwa vanhu ava nehurumende yeZimbabwe sezvo naiyo yakaomerwa. Asi vati vanenge vashaisisa vanogona kuzobatsirwa asi izvi zvinotora nguva yakareba.
Vati havo chavanogona kubatsira vari kuda kudzokera ava kutsvaga mabhazi anovatakura kuenda kuZimbabwe asi vachizvibhadharira mari inosvika mazana matanhatu emarands. Panyaya yechikafu, vati vachayedza kuendesa mazita evanhu kumasangano anobatsira nechikafu uye kutsvagawo chimwe chikafu.
Asi sechisungo chitsva chehurumende vanhu ava pavanosvika muZimbabwe vanotarisirwa kumbogariswa munzvimbo dzakatarwa nehurumende vachivhenekwa kuti havana chirwere checoronavirus here vasati vabvumidzwa kusangana nevamwe vanhu munyika.
VaLazurus Chinhara avo vasingaone uyewo vairarama nekupemha muJohannesburg vanoti pavari kugara nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu hapachagarike.
VaChinhara vaenderera mberi vachiti hurumende yeZimbabwe yaomesera mhuri yayo zvikuru vakaremara sezvo vasina mari dzinodiwa pakubhadhara mabhazi kuti vadzokere kumusha.
Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose kwavari nevamwe vavo
Muzvare Tanyaradzwa Masamba vanobva kuKadoma vachishanda kuDe Doreens mudunhu reWestern Cape vanoti ivo nevamwe vavo vave kuda kudzokera kumusha.
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga vashora hurumende yeZimbabwe nekutadza kuyamura mhuri yayo panguva yakadai.
VaMavhinga vakurudzira vose vanokwanisa kuyamura zvizvarwa izvi nezvekudya kana mari dzekufambisa kuti vaite izvi.
VaLeonard Kazikambani vanoti vange vakazvipira kudzokera kumusha uye vatenda muzinda weZimbabwe nekuvapa mukana uyu asi vanoti kuzochengetwa kwemazuva makumi maviri nerimwe ku Beitbridge ndizvo zvakavaomera naizvozvo nekudaro vafunga kugara havo muSouth Africa.
Kunyangwe muSouth Africa muine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda, VaHamadziripi vanoti hapana kana chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete zvacho chati chafa kana kubatwa chiine chirwere cheCovid-19 icho chabata zvizvarwa zveSouth Africa zvinodarika zvuru zvitanhatu uye kuuraya zana nemakumi maviri nevatatu
Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa VaNelson Kgwete, havana kukwanisa kupindura mibvunzo yabva kuStudio 7.